Ravalomanana Marc : Hanao amboletra Ravalomanana -
AccueilRaharaham-pirenenaRavalomanana Marc : Hanao amboletra Ravalomanana
04/12/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ny sabotsy lasa teo no nanararaotan-dRavalomanana indray ny pi-maso izay ataony amin’ny firenena Frantsay, manoloana ny efa filazany ny firotsahany hofidiana amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ny taona 2018. Efa fantatr’i Ravalomanana tsara mantsy ny fanatanterahan’ny masoivoho frantsay Veronique Voulant ny fampisehoana izay notanterahin’ ny 3MA, na ny Madagasikara, Maraoka, Mali, izay notanterahina tetsy amin’ny IFM Analakely. Taorian’ ny fampisehoana anefa dia nisy ny fitsidihana izay notanterahin’ny masoivoho frantsay, izay miasa sy monina eto amintsika ity, ka teo no nanararaotan-dRavalomanana ny firesahana sy ny pi-maso ho amin’ ny 2018. Atao tokoa aza hoe amin’ny maha mpanolotsaina manokan’ny ben’ ny tanàna no nahatongavany teny an-toerana, ary nanatanterahany ny fitsidihana ny IFM niaraka amin’ny masoivohon’ i Frantsa. Izany hoe raha tena fifidianana no antony dia mametra-panotaniana izany ny rehetra hoe ity filoha teo aloha ity izany dia madio tokoa ve ny Bultin N°3 na ny Casier Judiciaire-ny. Raha mihomana fratratra ihany koa izy amin’ny fifidianana 2018, dia izay ve ilay hoe tsimatimanota.
Mbola voaheloka mandrapahafatiny Ravalomanana Marc tamin’ny raharaha 2009. Tsy mbola maty iny sazy iny na lazaina fa very aza ny dosie. Tsy ho isan’ireo mahazo famotsoran-keloka koa mantsy ny olona tahaka azy. Satria tokoa dia tsy ao anatin’ny mahazo famotsoran-keloka ny olona nandatsa-drà, ny olona namono olona mazava ho azy. Mazava be anefa fa faty olona no ao anatin’io dosie 2009 izay nahagaga fa lazaian fa very iny. Tsy ho isan’ny lany ho kandidà mihitsy arak’izany Ravalomanana amin’ny 2018 na misy ny “ni…ni” na tsy misy. Ireo fihetsiny ombieny ombieny aseho ireo anefa, dia mampiseho fa vonona ny hanao amboletra amin’ny 2018. Tsy misy lalan-tokana azon-dRavalomanana Marc aleha raha tsy ny fanonganam-panjakana angaha raha te ho eo amin’ny fitondrana izy satria ny momba azy rehetra dia efa maloto avokoa.
Tsy tongatonga ho azy akory itony fihetsiky Ravalomanana Marc manao pi-maso amin’ny Fianakaviambe Iraisam-pirenena itony. Aza adinoina fa ny Frantsay dia ao anatin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena. Tsy hanohana olona maloto dosie na oviana na oviana mihitsy anefa ny fianakaviambe iraisam-pirenena satria izy ireo indrindra no fatra-panaja ny Accord de Cotonou izay milaza fa tsy mahazo milatsaka hofidiana ny kandikà namono olona sy nandatsa-drà tao an-dRavalomanana. Ho lany andro eo ihany koa Ravalomanana Marc raha ny fanohanana avy amin’ny Fianakaviambe iraisam-pirenena no andrasany satria ry zareo ireo ihany no efa nanasazy azy nanomboka ny 2008 ka nanapaka ny famatsiam-bola teo am-pelatanany. Tsy fisian’ny “bonne gouvernance” no anton’ilay fanapahana ny famatsiam-bola tamin’izany satria nambaran’ny fianakaviambe iraisam-pirenena tamin’izany fa nafangaron-dRavalomanana Marc ny fitantanana ny firenena sy ny orinasany manokana.
Tsy am-pihambahambana no nanambaran’ny Filoham-pirenena tamin’ny lahateny nataony nandritra ny fitokanana ireo fotodrafitrasa roa an’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany sy ny fankalazana ny faha-56 taona ny Fitsarana Tampony, fa ao anatin’ny Lalàm-panorenana no ahitana ny foto-kevitra ...Tohiny